Ejipta: Soso-kevitra ho An’ny Mpanao Fihetsiketsehana ao Koety · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Soso-kevitra ho An'ny Mpanao Fihetsiketsehana ao Koety	Voadika ny 26 Oktobra 2012 4:08 GMT
Zarao: Satria efa miditra amin'ny hetsi-panoherana goavana indrindra ny Koesiana hanamelohana ny fanovana lalàmpifidianana, nataon'ny mpandovan'ny fanjakana rehefa noravana ny Antenimiera, nisahirana tao amin'ny Twitter ny Ejipsiana mba hanome soso-kevitra ireo Koesiana amin'izay tokony atao sy tsy tokony atao.
Resaka fomba fiakanjo ho an'ny lehilahy Koesiana, izay manao akanjo matsora lavabe antsoina hoe (thobe) no noresahan'i Samah Anwariti. Hoy izy nisioka [ar]:
@samahanwar: Tsy mety amin'ny revolisiona ny manao akanjo lavabe (thobe)
Taminà sioka hafa, nampahatonga saina azy ireo i @samahanwar:
@samahanwar: Aza simbana ny firenenareo. Mivelona ara-dalàna ianareo. Misaora an'Andriamanitra noho ny fitahiany anareo. Misy vahoaka hafa tsy afaka mivelona ara-dalàna
Naneho fanehoan-kevitra tahaka izany ihany koa ny Ejipsiana maro. Ebrahim Elkhadm nanoratra hoe [ar]:
@ebrahimelkhadm: Mety ho very ianareo raha mihaino anay. Manoro hevitra anay aza tsy hainay. Aza adala
Elshazli nanampy hoe:
@El_Shazli: Mifantoha amin'ny teny rehetra izay soratana amin'ny alalan'izany tenifototra ary ataovy izay mifanohitra amin'izany. Ho hitanareo fa lasa fahombiazana ny revolisionareo
Nanome soso-kevitra ireo mpanao fihetsiketsehana Koetiana ny Ejypsiana tao amin'ny Twitter. Koetiana, Naser AlMufarrij nizara ity pikantsary ity tao amin'ny Twitter
Nizara ity pikantsary tamin'ny sioka ity i Naser AlMufarrij, Koesiana, izay vakiana amin'ny teny Arabo:
Nahoana ianareo no mitady revolisiona nefa manankarembe ny ankizy tanora indrindra aminareo raha oharina amin'ny minisitra Ejipsiana?
Ejipsiana maro nanaraotra namazivazy momba ny revolisionany manokana, tahaka an'i Gepril Thuwaiba izay nisioka hoe:
@Gepril1: Alohan'ny hidinanao an-dalambe amin'ny manaraka, tokony hifanaraka amin'ny namany ny tsirairay. Rehefa vita ny diabe, aza miresaka, mifandrese lahatra dia samy manana ny lalany avy eo
@Gepril1: Kabary telo fotsiny no nisy [miresaka momba ny kabary telo nataon'i Mubarak alohan'ny nandaozany ny fitondrana]. Raha mitranga izany, dia arahabaina! Rehefa vita ny fankalazana lehibe ataonareo, aza adino izahay. Tsarovy izahay na dia solitany amin'ny barika vitsivitsy fotsiny aza satria mafy ny toe-draharaha eto aminay
Haingana ery ny Koesiana nanamarika fa fihetsiketsehana tsotra fotsiny ny hetsika ao Koety fa tsy revolisiona. Barcelonya nanazava:
@Barcelonya: Tsy revolisiona izao. Fa hetsi-panoherana.
Mahitsy i Mona Abo Elyazeed tamin'ny soso-keviny ary nizara foto-kevitra iray:
@MonaAbo: Tsy misy marimaritra iraisana
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 8 ora izayPalestinaMitondra Fanantenana Sy Fanasitranana Any Palestina Ny ‘Faribohitra Miloko Marevaka’ Ao Gaza
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Swahili, বাংলা, English
Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaEjiptaKoety